Gabadho Qaabkaan ayaad ku ogaan kartaa in Ninkaaga xubintiisa taranka ay caafimaad qabto - iftineducation.com
iftineducation.com – Ninku waa inuu xubnihiisa taranka (guskiisa) biyo iyo saabuun ku mayro ugu yaraan halmar maalintii. Waa inuu galmo kasta dabadeed xubnihiisa si feejigan u dhaqaa, gaar ahaan marka uu ka baqayo inuu jabto qaado, isaga oo ku dadaalaya inuu xubnahaasi ka ilaaliyo wax dhaawac ah.
Ragga qolfada laga gooyo (sida Muslimiinta iyo Yuhuudda) iyaga waxaa ku filan in marka ay qubaysanayaan saabuunta ku mayraan xubnahooda taranka, mar kasta oo ay kaadiyaan ama dumarkooda u galmoodaanna iyana si
wanaagsan u dhaqaan. Waxaa haddaba lagugula dardaarmayaa in galmo kasta dabadeed aad geedkaaga biyo kulul ku mayrtid, kulayle iyo qaboobe xilligii la joogaba, maxaa yeelay waxaa la caddeeyey in biyaha qaboobi ay geedka ragga jilciyaan oo dilaan gabadhyahay qodobadan kula dadaal ninkaaga si uusan xubinkaa yar ee aad kuwada joogtan u jilcin .
gabadhyahay haddii xaasle aad tahay fadlan usheeg dumarka kale ee la qabo mahadsanid
Gabar soomaali dabada dhiibaneyso muuqaal dareen leh kacsi hawada hagalin